Mma nke nwanyị Ihu ọma
Ezie, na ntụziaka maka ihe ịchọ mma nke oge a, ị ga-agụrịrị banyere mmetụta dị egwu nke ihe ndị ahụ, ma ị ga-ahụkarị ịdọ aka ná ntị, dịka ọmụmaatụ, anaghị eji ude a na anyanwụ. Ka ọ dị ugbu a, ihe ndị dị na ọgwụ ndị ahụ na-arụsi ọrụ ike ugbu a na ọ bụ naanị ndị ọkachamara nwere ike ịghọta nsogbu niile ha ji mee ihe. Na nke a nakwa na ihe ọ bụla ọzọ ga - enyere ndụmọdụ gbasara cosmetologist gbasara nlekọta anụahụ.
Enweghị ike ịnweta anyanwụ na ego nwere retinol. Ọfọn, ma ọ bụrụ na ị gaghị ahapụ ụlọ ahụ ma ọlị. N'ihi na ọbụna ntakịrị ihe nke ihe a nwere ike ime ka akpụkpọ anụ.
N'ikpeazụ, retinol , ma ọ bụ provitamin A, bụ ihe magburu onwe ya. Ọ na-eme ka enwee ike na-agbanwe agbanwe ma na-agbanwe agbanwe nke akpụkpọ ahụ, na-eme ka ọkpụkpụ wrinkles, na-ebelata mbufụt, na-eme ka ọnyá na-agwọ ọrịa. Ya mere, n'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, e webatawo ya na ngwaahịa dị iche iche nke ịchọ mma: mgbochi ịka nká, ọgwụ mgbochi, igbochi hyperkeratosis (ikpochasị akpụkpọ anụ). Egwu, retinoids nwere otu ihe ọzọ na n'oge okpomọkụ na-aghọ ihe dị mkpa - ha na-eme ka akpụkpọ ahụ dịkwuo n'ahụ ultraviolet, mgbe ụfọdụ na-akpata mmerụ ahụ, ọbara ọbara, mmeghachi omume nfụkasị. Ya mere ị ga-eji nlezianya jiri nlezianya a mee nke ọma.
Ihe ọzọ ị ga - achọ ịmụrụ anya n'oge okpomọkụ bụ mkpụrụ ọgwụ. Ndị a gụnyere: apple, wine, lactic, lemon, grape na glycolic. N'okpuru ihe ịchọ mma - ma ọkachamara na oke oriri - a na-akpọkarị ha AHA, nke sụgharịrị dịka "alpha hydroxy acids. Ihe kachasị ha mkpa bụ na ha nwere ike ịbanye banye n'ime ala dị omimi ruo n'ọkụ. Ya mere, Ngosiputa Ngwa na ANA-acids - ezigbo onye inyeaka n'ọgụ a na-alụ megide wrinkles, afọ ọkpụkpụ, otutu. Ma ị na-enweta ọgwụgwọ na ọgwụ dị mma, ṅaa ntị na pasent acid. Iji mee ka akpụkpọ ahụ dị ọhụrụ ma melite, ọ bụ ihe dị ntakịrị. Ma ọ bụrụ na nkwadebe ahụ nwere 12-15%, a na-atụlerịrị ya dị ka ọkachamara, ya bụ, ọ nwere ike itinye ya n'okpuru nlekọta nke ndị ọkachamara mma na ekele na ndụmọdụ nke cosmetologists maka nlekọta anụahụ. N'oge okpomọkụ ọ dịghị atụ aro iji ngwaahịa ndị nwere 12 - 15% ọdịnaya nke mkpụrụ osisi mkpụrụ. Ndị na-achọ ịchọrọ ọgwụ na-akacha mma ịjụ ANA-acids. Na nsogbu akpụkpọ ahụ na-ebute ka rashes, ọ ga-ekwe omume iji otu ANA-acids jikọrọ ya na beta-acids (salicylic), mana nke a ga-abụ naanị ihe a na-akpọ "ụlọ" (n'ime ha ọdịnaya nke acid adịghị aba 5-10%).
Ihe na-esote na ndepụta anyị bụ "Nlezianya: oge ​​okpomọkụ!" Ọ bụ vitamin C. Ihe a magburu onwe ya gụnyere njikọ nke collagen, n'ihi ya, a na-ejikarị ya eme ihe iji mee ka akpụkpọ anụ na ọkpụkpụ dị mma. Na vitamin C bụ ihe na-ewu ewu na-ewu ewu n'ihi na ọ "maara otú" iji gbochie usoro nke melanin guzobere.
Ntakịrị vitamin C na ude a na-eme ka akpụkpọ ahụ dịkwuo ọkụ, nwere mmetụta nke anyanwụ. A na-ejikarị ọgwụ ndị a eme ihe dịka ihe ngwọta ụbọchị. Ma pasent buru ibu (nke a, dịka iwu, nhazi ịchọ mma ọkachamara) nwere mmetụta nkwụsịtụ. Agaghị m agwa onye ọ bụla ka ọ mee ka ọ bụrụ ịda mbà n'oge okpomọkụ. Nke a bụ igbu oge na ego. Karịsịa ma ọ bụrụ na ị gaghị anọ ala n'okpuru oge niile. N'okpuru ìhè anyanwụ, anyị na-enweta ọbụna n'okporo ụzọ site n'ọfịs ịkwado. Tụkwasị na nke ahụ, nnukwu ọdịnaya nke vitamin C na ngwaahịa ịchọ mma na njiri anyanwụ nwere ike ịkpata mmeghachi omume. " Cheta: ọ bụrụ na ude sitere na nlekọta maka nlekọta ụlọ adịghị ekwu "whitening", ma depụta ihe ndị ọzọ magburu onwe ya nke vitamin C - o nwere mmetụta antioxidant, na-ewusi mgbidi nke arịa ọbara, wdg, - ị nwere ike ịzụta ya n'enweghị nsogbu. N'ọnọdụ ọzọ, ọ ka mma ịkpọtụrụ ọkachamara ọkachamara.
Site na nchacha ihe ọ bụla na-arụ ọrụ n'oge okpomọkụ, ndị ọkachamara na-achọ ka ị kpachara anya. Ọ bụrụ na ị na-etinye ọgwụ na-agbanyeghachi na ihu gị ma na-edina ala n'elekere elekere abụọ nke ehihie na ụsọ osimiri Turkey, ọ ga-abụ na ị ga-enweta nhụsianya, ọ bụghị mmetụta a kọwara na ntụziaka maka ọgwụ. Tupu ịga na anyanwụ na-arụsi ọrụ ike (n'ụsọ osimiri ma ọ bụ obodo) ọ dị mkpa iji naanị ihe nchebe pụrụ iche na SPF 20 na elu. " (Site n'ụzọ, na creams taa nile jiri SPF 8 - 12, mana nke a bụ naanị maka oge oyi maọbụ ọ bụrụ na ị na-etinye ụbọchị dum n'ọfịs).
Tụkwasị na nke ahụ, n'okpuru nduzi nke ikuku dị elu, a na-arụ ọrụ dị iche iche dị iche iche na mmiri iyi. Ya mere, na oge na-ekpo ọkụ, ọ gaghị ekwe omume itinye ude dị ukwuu. A ga-eji ngwá ọrụ na-edozi ha. Maka nsogbu akpụkpọ ahụ, ọ ka mma ịhọrọ gel-dịka ma ọ bụ nkwụsịtụ, n'ihi na nkịtị - emulsions na cream cream, maka afọ - mmiri creams.
N'ihe gbasara ụlọ ọrụ ndị ọkachamara, mgbe ahụ, n'ezie, oge okpomọkụ anaghị abụ oge kachasị mma maka ọtụtụ ọrụ. Ụfọdụ nwere ike ime naanị site na ịdebe usoro nchebe.
Ihe mbụ nke na-emechi iwuchibido bụ ihe dị mkpa, na ọbụna ka ọ dịkwuo njọ. Mfe, iji mee ka anụ ahụ dịghachi ọhụrụ - biko. Mpempe akwụkwọ dị oke njọ ruo mgbe ọdịda, ma ọ bụghị nke ahụ, ị ​​ga-eme ka akpụkpọ ahụ gị dị oke njọ. Ma ọ bụrụ na ị na-eji nlezianya eme ihe na ebe obibi, ihe mkpuchi, ndị ọzọ na-ehichacha nwere ike iji otu ugboro n'izu, n'ihi na ha anaghị emerụ akpụkpọ ahụ dị ka ọgwụ ndị na-emepụta ọgwụ.
Ọ gaghị ekwe omume ime polishing na okpomọkụ , iji wepụ ọnya akpụkpọ anụ, vascular asterisks. Ma ọ bụ, dị ka ihe ikpeazụ ị ga-eme, hụ ndokwa niile dọkịta ga-agwa gị.
Ọ bụrụ na ị na-eme mesotherapy, jiri ngwa ngwa tinye ebe nchekwa dịka 25 iji zere hyperpigmentation. Ma, n'ezie, anaghị apụta n'ọdụ ụgbọ mmiri na awa 24 ọzọ.
Okwu mmalite nke botulinum toxin. Ebe ọ bụ na usoro a nwere otu oge (otu ugboro n'ọnwa ọ bụla), ọ dịghị mkpa ịhapụ ya n'oge okpomọkụ. Ma, ọ dị mkpa ịkwado otu nkwenye ahụ dịka na mesotherapy.
E nwere ihe ize ndụ nke ikpughe ọkụ mgbe ozugbo ogbugba. A sị ka e kwuwe, ọbụna na iwebata microdoses nke ndị mba ọzọ, microtrauma nke anụ ahụ gbara gburugburu na-ewere ọnọdụ. Ọ dịkwa mkpa ka ị kpachara anya ka ọ ghara ịbanye na macroattack n'okpuru nduzi nke okpomọkụ. Ya mere, n'ụzọ, ozugbo ị gachara, ị gaghị enwe ike ịme egwuregwu, gaa sauna na solarium.
Iwebata gel bụ ọbụna ihe mgbagwoju anya karịa botulinum toxin, n'ihi na a na-ewebata ọtụtụ ihe ndị mba ọzọ. Na mgbakwunye, mgbe usoro a gasịrị, ọzịza, ọbara ọbara nke anụ ahụ - ihe ọ bụla. Ya mere, sauna, sauna, solarium, osimiri - na-amachibidoro iwu.
Usoro ngwanrọ. Ọ bụrụ na nke a bụ miri wetening, nke ahụ bụ galvanic, ultrasound, microcurrents - biko. Ma ọbụlagodi mgbe mbempe dị otú ahụ, nke, ọ ga-adị, ọ dịghị emerụ ahụ ọkpụkpụ ahụ, a gaghị atụ aro ya ka ọ pụọ n'okpuru ọkụ anyanwụ na-arụ ọrụ n'ime awa 24. Na mgbe redio na - ebuli - adịghị apụta na anyanwụ maka ọtụtụ ụbọchị.
Mgbe laser na photoepilation, nnọkọ nke photorejuvenation nwekwara ike ghara sunbathing. Mana n'ọnọdụ a, ọnọdụ dị ike karị: a gaghị eme usoro dị otú ahụ ma ọ bụrụ na i nweworị oge iji nweta ezigbo tan. Ma ọ bụghị ya, ị nwere ike ịnweta ọkụ.
Okwu a "oge okpomọkụ" na-enye anyị ọṅụ. Dacha, oké osimiri, ihe nkiri na ọdịdị - ndepụta nke ihe ụtọ nwere ike ịnọgide na-adịru mgbe ebighị ebi. Ma ọ bụrụ na ị ka na-ege ntị na nkwenye anyị niile, ọ dịghị ihe ga-ekpuchi ọnọdụ gị.
Acha anụ nke nkuchianya
Atụmatụ maka ilekọta nsogbu akpụkpọ ahụ
Esi weghachite akpụkpọ ahụ mgbe ezumike gasịrị
Mweghachi anụ ahụ na plasmolift
Olee otua esi tufuo uzo pigmenti na ndi mmadu?
Mmetụta nke ihu igwe
Nkpu ihe oriri maka ihu
One-color make-up - beauty-trend-2017
Eziokwu niile gbasara ihe ịchọ mma
Glamor Nicks for Girls
Ịhịa aka n'ahụ nke Lymphatic bụ usoro obi ụtọ na nke bara uru
Ugboro oku maka Nwaanyị Nwanyi maka June 2017
Ịma mma na-adịgide adịgide: anyị na-eme manicure gel-varnish
Ugboro oku maka January 2018 - nwanyị-Taurus - site na Tamara Globa na Angela Pearl
Pizza na broccoli, eyịm na olive oliv
Talismans dị ka onyinye maka Feng Shui
Atụmatụ: otu esi akpa àgwà n'ụzọ ziri ezi na nyocha
Ụmụaka rickets, mgbochi, ọgwụgwọ
Ọ ka mma ịhọrọ ịhụnanya maọbụ ọrụ?
Esi mee ngwa ngwa gwọọ akpịrị na agba agba
Kasị ọka ụtụtụ
Dzhigurda na Anisin ka a mara ikpe ụgha ọzọ
Dị ka Ekaterina Skulkina na-enweghị nri ma na-ebu ọnụ furu efu 20 kilogram